यी तीन चर्चित ब्याट्सम्यान : जसले १२ बलमै अर्धशतक बनाए
By क्रिकेट पाटी	 On Feb 17, 2021
काठमाडौं : क्रिकेटमा प्रायः जसो दर्शक ब्याट्सम्यानको शट हेर्न मन पराउँछन् । ब्याट्सम्यान पनि दर्शकलाई निराश गर्न चाहँदैनन् । मैदानमा आफ्नो ब्याटबाट रन बनाउनबाट ब्याट्सम्यान पनि पछाडि हट्दैनन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा कयौँ खतरनाक खेलाडी छन् । जसकोे ब्याटिङ देखेर दर्शक एकदमै खुसी हुन्थे । जब यी ब्याट्सम्यान रन बनाउथेँ तब विपक्षी टिमका बलरको दिन एकदमै खराब रहन्थ्यो । कप्तानलाई रणनीति र फिल्डिङ बेला-बेला बदल्न बाध्य बनाउँछन् ।
क्रिकेटको सबै प्रारूपमा फरक-फरक ‘तुफानी ब्याट्सम्यान’ देख्न मिल्छ । बलरलाई पनि आफ्नो लाइन र लेन्थभन्दा पनि फरकै बल फ्ँयाक्न बाध्य बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा कोही यस्ता ब्याट्म्यान भएका छन् । जसको लक्ष्य नै बलरको पिटाइ गर्ने हुन्छ ।
आज हामी तीन यस्ता ब्याट्सम्यानको बारेमा चर्चा गर्दछौं । जसले आफ्नो ब्याटिङले कयौँ कीर्तिमान बनाएका छन् । यी ब्याट्सम्यानले टी-२० क्रिकेटमा विस्फोटक पारी खेल्दै मात्र १२ बलमा आफ्नो अर्धशतक पूरा गरेका छन् ।
१. युवराज सिंह : यो सूचीको पहिलो स्थानमा पूर्वक्रिकेटर खेलाडी युवराज सिंहको नाम आउँछ । युवराजले सन् २००७ भएको टी-२० विश्वकपमा इंग्ल्याण्डका चर्चित बलर स्टुअर्ट ब्राडको ६ बलमा ६ छक्का प्रहार गरेका थिए ।
सो म्याचमा युवराजले मात्र १२ बलमा आफ्नो अर्धशतक पूरा गरेका थिए । उनले त्यो म्याचमा ७ छक्काको मद्दतमा मात्र १६ बलमा ५८ रनको विस्फोटक पारी खेलेका थिए । युवराजको त्यो पारीलाई आज पनि याद गरिन्छ ।
२. क्रिस गेल : यो सूचीको दोस्रोे स्थानमा वेष्ट इण्डिजका विस्फोटक ब्याट्सम्यान क्रिस गेलको नाम आउँछ । गेलले बिग ब्यास लिगमा मेलबर्न रेनेगेड्सबाट खेल्दै एडिलेड स्ट्राइकर्सविरुद्ध मात्र १२ बलमा आफ्नो अर्धशतक पूरा गरेका थिए ।
सो म्याचमा गेलले १७ बलमा ७ छक्का र २ चौकाको मद्दतमा ५६ रनको तुफानी पारी खेलेका थिए । तर, त्यो म्याच गेलको टिमले हारेको थियो ।
३. हजरतुल्लाह जजाई : यो सूचीको तेस्रो स्थानमा अफगानी ब्याट्सम्यान हजरतुल्लाह जजाईको नाम आउँछ । हजरतुल्लाहले अफगानिस्तान प्रिमियर लिगमा लगातार एक ओभरको ६ बलमा ६ छक्का प्रहार गरेका थिए ।
त्यस्तै, उनले मात्र १२ बलमा आफ्नो अर्धशतक पूरा गरेका थिए । काबज्वाननबाट खेल्दै बल्ख लिजेन्ड्सविरुद्ध हजरतुल्लाहले मात्र १७ बलमा ६२ को बहुमूल्य पारी खेलेका थिए । यस्तो बहुमूल्य पारी खेलेर पनि उनको टिमले हार झेलेको थियो ।
क्रिस गेलयुवराज सिंहहजरतुल्लाह जजाई